‘नेपाल आइडल–३’को फाइनल आज : कसले जित्ला त उपाधी ? – Tesroaankha | Nepal's leading online news portal | Nepali Online News
‘नेपाल आइडल–३’को फाइनल आज : कसले जित्ला त उपाधी ?
१२ भाद्र, २०७७ ०७:०७ मा प्रकाशित
710 पटक पढिएको
काठमाडौं – नेपाली सांगीतिक इतिहासमा सर्वाधिक रुचाइएको रियालिटी सो ‘नेपाल आइडल–३’ मार्फत देशले आज तेस्रो नेपाल आइडल प्राप्त गर्दैछ । गायन रियालिलिटी सो ‘नेपाल आइडल–३’ को विभिन्न इलिमिनेसन राउन्ड पार गर्दै उत्कृष्ट ३ मा पुगेकामध्येबाट तेस्रो नेपाल आइडल घोषणा हुँदैछ । प्रतिस्पर्धाको उत्कृष्ट ३ मा सज्जा चौलागाईं, प्रवीण बेडुवाल र किरणकुमार भुजेल पुगेका छन् ।
हजारौंबाट छानिएर उत्कृष्ट ३ मा पर्न सफल भएका उनीहरूले पाएको भोटको आधारमा विजेता चयन हुनेछ । विजेताले ‘नेपाल आइडल–३ को उपाधिसहित ५० लाख रुपैयाँ पुरस्कार प्राप्त गर्नेछ । यसैगरी फस्ट रनरअपले १५ लाख र सेकेन्ड रनरअपले पाँच लाख नगद प्राप्त गर्नेछन् । अन्य हप्ताको कार्यक्रम जस्तै शुक्रबारको कार्यक्रममा सीमित मानिस र दर्शकको उपस्थितिमा नेपाल आइडल–३ को विजेता घोषणा गरिने प्रोजेक्ट हेड सुरेश पौडेलले जानकारी दिए ।
पौडेलका अनुसार कोभिड—१९ का कारण ग्रान्ड फिनाले सामान्य तवरमै सञ्चालन गर्न लागिएको हो । लकडाउन नभएको भए गत चैतमै कार्यक्रम सम्पन्न भइसक्थ्यो । कोरोनाका कारण रोकिएको कार्यक्रम करिब तीन साताअघि पुनः सुचारु भएको थियो । कार्यक्रमको निर्णायक मण्डलमा इन्दिरा जोशी, न्हयु वज्राचार्य र कालीप्रसाद बाँस्कोटा रहेका छन् ।
यसअघिका सिजनमा बुद्ध लामा र रवि ओडले यो उपाधि चुमिसकेका छन् । आउनुहोस् यस सिजनका उत्कृष्ट तीन प्रतिस्पर्धीलाई नजिकबाट नियालौँ ।
मोरङ पथरीकी सज्जा चौलागाईंको नेपाल आइडलमा छनोट भएसँगै रक पप र भर्सटायल गायकीको चर्चा हुन थाल्यो । उनको प्रस्तुति र बोल्ड स्वरको हरेक कार्यक्रममा प्रशंसा हुने गर्छ ।
ठमेल, दरबारमार्ग तथा कमलपोखरी क्षेत्रमा रहेका लाउन्जहरूमा उनी लाइभ गीत गाउने गर्थिन् । उनको ‘दी लोडिङ’ नामक ब्यान्ड थियो । कलेज पढ्दै, लाइभ गीत गाउँदै उनको दैनिकी चलिरहेको थियो । लाउन्जहरूमा हिन्दी, रक र अंग्रेजी गीत बढी गाउनुपर्थ्यो । तीनदेखि चार घण्टा निरन्तर गीत गाउनुपथ्र्यो ।
पहिलो पटक उनले फ्लेवर्स रेस्टुरेन्ट तारागाउँमा गाएकी थिइन् । गाएर कमाएको पहिलो कमाइ पाँच सय रपैयाँ थियो । उनका आमाबुवाले गाउन सधैं सहयोग गर्छन् । ब्याचलर्सकी विद्यार्थी सज्जा नेपाल आइडल सिजन–३ को अडिसनले यता तानिएकी हुन् ।
नेपाल आइडलमा अरूले गाएको सुन्दा यत्तिको त म पनि गाउन सक्छु भन्ने लाग्थ्यो उनलाई । गायक सविन राईकी फ्यान सज्जा नेपाल आइडलले आफूलाई संगीतसँग अझ नजिक बनाएको बताउँछिन् । हरेक प्रतियोगी एक से एक भएकाले आफू नै विजेता बन्नेमा ढुक्क भने छैनन् उनी । ‘टप फाइभमा पुग्नु पनि ठूलो उपलब्धि हो’, उनले सुनाइन् ।
बर्दिया राजापुरका प्रवीण बेडुवालको स्वर र प्रस्तुतिले निर्णायक तथा दर्शकको मन जितेको छ । शास्त्रीय संगीतका विद्यार्थी बेडुवाल जब नेपाल आइडलको स्टेजमा उत्रन्छन् उनी आफूलाई नै बिर्सन्छन् । गायन अवधिभर गीतमै डुब्छन् । हरेक इपिसोडमा अब्बल गाउने प्रवीण शान्त स्वभावका छन् ।
नेपाल आइडल सिजन–३ को अडिसन चलिरहेको थियो । बुटवल अडिसन हुँदा उनी चितवनमा थिए । नेपाली गीत संगीत सुनेर हुर्किएका प्रवीण नेपाली भाषाका गीत पनि उत्तिकै राम्रो गाउँथे । उनका नेपाली साथीले नेपाल आइडलमा जाने सल्लाह दिए । उनी पहिलो टेकमै छनोट भए । काँचो फलफूल बजारमा लग्यो भने कसैले किन्दैन भन्ने विचार राख्ने प्रवीण परिपक्व बनेर मात्रै संगीतमा आउनपर्छ भन्ने सोच राख्थे । यसैले पनि निकै मेहनत गरिरहेका छन् । त्यसैले त उनका हरेक प्रस्तुति अब्बल हुने गर्छन् । उनलाई जित्नै पर्छ भन्ने लाग्दैन । नेपाल आइडल एउटा उचित प्लेटफर्म भएकाले यहाँसम्म पुग्नु नै आफ्ना लागि विशेष उपलब्धि भएको ठान्छन् उनी ।
महोत्तरी बर्दिबासका किरणकुमार भुजेल वाइल्ड कार्ड इन्ट्रीमार्फत नेपाल आइडलमा पुनः भित्रिएका हुन् । पुनरागमसँगै उनले कार्यक्रममा तहल्का पिटिरहेका छन् । उनले सबै कार्यक्रममा दमदार प्रस्तुति दिएका छन् । उनी केही वर्षदेखि नेपाली संगीतमा संघर्ष गरिरहेका थिए ।
सामान्य किसान परिवारमा हुर्किएका किरणलाई संगीत सिक्ने रहरले संघर्ष र अभावको बाटोमा लामै हिँडएको छ । नेपाल आइडल आउनुअघि नै उनले केही गीत सार्वजनिक गरिसकेका थिए । कुशल गायक बन्ने सपनाले उनलाई अभावको बाटो पार गर्न हौसला दियो ।
नेपाल आइडललाई सुरुआतदेखि नै पछ्याएका भुजेल पहिलो सिजनमा थिएटर राउन्डसम्म पुगेर बाहिरिएका थिए । पिठ्यूँमा स्याउलाको भारी बोलको कर्णप्रिय गीत गाउँदै उनी सिजन-३ को अडिसनमा छनोट भएका थिए ।
अब सारेगमप, स्प्लिट्स भिल्लालगायत एपीवानमा
तीन दशकभन्दा बढी समय नेपालमा बिताउँदा पनि नेपाली नागरिकता छैन – कमल राई
चर्चित लोकगीतका संकलक धनबहादुर गायकको निधन
प्रतिलिपी अधिकार हननको आरोपमा विन्ध्यवासिनी म्युजिककी कार्यकारी प्रमुख प्रक्राउ
नायिका स्वेता खड्का विवाह बन्धनमा
जोन सिनाले गरे इरानी युवती शारियातजादेसँग विवाह
चलचित्र बुकिको आम्दानी बागलुङको पर्यटन पूर्वाधारमा खर्च गरिने
श्रद्धा र साराको नाम लागूऔषध मुद्दामा
‘सहायक श्रीमान’ले जित्यो कान्समा प्रथम पुरस्कार
सज्जा बनिन् नेपाल आइडल सिजन–३ च्याम्पिअन